मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पक्का, कुन कुन मन्त्री हट्दैछन् ? को मन्त्री बन्दैछ ? हेर्नुहोस आज असोज ५ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पक्का, कुन कुन मन्त्री हट्दैछन् ? को मन्त्री बन्दैछ ? हेर्नुहोस आज असोज ५ गतेका मुख्य समाचारहरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने पक्का भएको छ । तर को-को हट्ने, को-को मन्त्री बन्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी नै छ ।
यो संगै आज असोज ५ गतेका मुख्य समाचारहरु तलको भिडियोमा हेर्नुहोस :